Miady Hevitra Momba Ny Fampijaliana Biby Mandritra Ny Fetibe Dashain Ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2017 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Italiano, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, 한국어, Español, македонски, English
Durga, ilay andriamanibavy Hindoa. Sary nalain’i Christina Kundu, Wikimedia Commons.
Hifarana ny Zoma 20 Oktobra amin’ity taona ity ny Dashain, ilay fety be mpankalaza indrindra ao Nepal. Omena voninahitra amin'io fankalazàna maharitra dimy ambinifolo andro io ilay andriamanibavy Durga, izay: taratry ny fahefana, ny fanambinana, ny fitiavan-dreny ary ny famotehana ny ratsy.
Koa satria tompoina amin’ny maha endriky ny tanjaka sy mpamotika ny ratsy azy ilay andriamanibavy Durga dia misy ny fanaovana sorona biby manerana ireo tempoly ao Nepal mandritra ny Dashain. Mariky ny famotehana ny ratsy ny fanaovana sorona, ary manantena ny hankasitrahan’ilay andriamanibavy izany ireo mpanompo.
Tamin’ny taona lasa, nikarakara fidinana andalambe sy fihaonana ho an'ny besinimaro ireo vondrona maro samihafa mba hanentanana ny olona tsy hanao sorona ny biby amin’ny anaran’ny finoana. Notantarain'ny Global Voices izany tanatinà lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Ho anà Fetibe Dashain Miantra kokoa.
Indrisy anefa, mbola mitohy io fomba fanao io ary nahitàna biby maro natao sorona manerana ny firenena ihany koa ny fetibe Dashain tamin’ity taona ity.
Mandroso hevitra ho an'ireo mpanompo i Laura Goldman ao amin’ny Change.org fa tokony “Hanao Sorona Voatavo, Fa Tsy Omby, Mandritra Ny Fety Dashain ao Nepal”:
“… Manana hevitra tsara kokoa ny Animal Welfare Network Nepal (Tambajotra Ho An'ny Fiadanan'ny Biby Ao Nepal na AWNN) mba hankalazana ny puja amin’ny fomba malefaka sy tsara kokoa. Maninona raha voatavo no vonoina fa tsy omby? Voanio asolo ny osy ? Mitovy ihany ny hevitra voiziny, anefa ilay ray mba miantra kokoa (ary tsy dia mahatsiravina loatra).
Natombok'ilay tambajotra tamin’ny voalohandohan’ny taona teo ny fampielezankeviny “Atsaharo ny Fanaovana Sorona Biby” nandritra ilay fetibe Gadhimai tao Bara, izay nanaovana sorona biby 200.000 tao anatin’ny 24 ora.”
Manondro ny soratra masina ihany koa ny sasany ka miantso ireo mpanompo fa tsy mifanaraka amin’ny fotokevitra Hindoa ny fanaovana sorona biby.
Milaza ny AnimalRights Nepal (Hetsika Nepaley ho An'ny Zon'ny Biby) fa tsy afaka ampitoniana amin'ny fanaovana sorona ny biby ilay andriamanibavy izay mariky ny fitiavan-dreny satria hanatrika ny voahariny hovonoina izy.
“Raha ny voalaza ao amin’ireo andininteny ara-pivavahana Hindoa momba ny zon’ny biby, tsisy milaza mihitsy ao fa mampitony ny andriamanidahy sy andriamanibavy ny fanaovana sorona biby, tsy hankasitraka velively ny fandringanana ny voahariny amin’ny anarany izy ireo. Ho an’ny filàny samirery no amonoan’ny olombelona ireo biby tsy manantsiny ireo. Mifanohitra amin’ny finoana sy lalàm-piainana Hindoa izany, raha ny marina. Tokony tandrovina ny fifanajana izay tsy maintsy misy eo amin’ny samy zavamananaina.”
Ny mahaliana dia, ao Nepal ihany no tena olana be io adihevitra momba ny fanaovana sorona biby mandritra ny Dashain io. Tsy dia maresaka loatra momba izy io ireo nepaley mankalaza ny Dashain any ampitan-dranomasina, ny tena antony dia satria tsy tafiditra ao amin’ny fankalazana ny Dashain ny fanaovana sorona biby any ivelan’i Nepal – indrindra ao Eoropa sy ao Amerika Avaratra.
Na eo aza ny adihevitra momba ny fanaovana sorona biby sy ny fitomboan’ny fifantohan’ny media iraisam-pirenena amin’izy io, mbola mitazona toerana manokana ao am-pon’ny Nepaley manerana ny tany ny Dashain.
Tika an'ny Dashain. Sary an'i Doll Damned, mpampiasa Flickr. CC BY-NC-ND
Tany Afganistana kosa, nankalaza ny Dashain tamin’ny fomban-drazana ny tafika britanika ao Gurkha, tamin’ny tika nentim-paharazana (natao tamin’ny vovoka mena, yaourt ary voam-bary) sy ny tsodrano avy amin’ireo zokiolona.
“Manamboatra tempoly kely isaky ny Toby Fisafoany ireo Gurkhas mba hivavahany isan-kerinandro ary hahazoany fitahiana. Tamin’ny Aogositra, nitsidika ireo Gurkhas tao Nahr-e Saraj ny Pundit (Pretra Hindoa) an’ny Tafika, nanatanteraka asa an-tempoly ary nitahy ireo miaramila tsirairay avy amin’ny fametrahana tika (teboka mena eo amin’ny handrina).
Mandritra ny fetibe Dashain, apetraka anatin'ireo tempoly ny voankazo atao fanatitra ary tanterahana isa-maraina ireo asa an-tempoly atao ho an'ny miaramila. Maro ireo Gurkhas hita misy tikka mena mandritra ny Dashain – fitahiana mba hieren-doza ary fanambinana azy ireo raha manakaiky ny faran’ny asany izy ary hotafody soa aman-tsara any amin’ny fianakaviany.”
Ankalazaina am-pientanentanana ihany koa ny Dashain any amin’ireo fianakaviana manana kolontsaina mifangaro. Miresaka momba ny zavatra iainany mandritra ny fanarahana ilay fetibe ny Amerikana vavy iray manambady Nepaley, ao amin’ny bilaoginy AmericaNepali.
Toy ny fandinihana ara-pinoana rehetra, manana ireo fanambiny manokana eo amin'ny foto-pisainana sy ny fitsipi-pitondrantena ihany koa ny Dashain, kanefa tsy azontsika odiana fanina ny fifaliana sy ny harena entin’ireo fandinihana ireo ho antsika rehefa miatrika izany fanamby izany isika.